Dastabej » मानव सभ्यताको निरन्तरताका लागि प्रकृति संरक्षण
मानव सभ्यताको निरन्तरताका लागि प्रकृति संरक्षण – Dastabej
मानव सभ्यताको निरन्तरताका लागि प्रकृति संरक्षण
रमेश कुमार थापा ठाकुरबाबा-९, बर्दिया
हामीले आस्था राख्ने र सम्मानसाथ पूजा गर्ने देबी देवताले बास गरेको हाम्रो हिमालय पर्वत, देबिदेवता बिचरण गर्ने वनजंगल, देबिदेवताले भोजन गर्ने फलफुलका बोट अनि स्नान गर्ने नदी, ताल, पोखरीहरु मानविय व्यवहारका कारण बिनास, दुषित र प्रदुषित भएका छन । पृथ्वीका अन्य प्राणीहरु प्रकृतिले दिएका कुरामा चित्त बुझाएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन प्रयासरत छन । तर मानिसलाई अस्ति्त्व निरन्तरताका लागि प्रकृतिले दिएका कुरामा चित्त बुझेको छैन । उ अन्य जीव जन्तुको वासस्थान, आहारा खोस्दै आफ्नो अधिपत्य कायम गर्नका लागि निरिह जीवजन्तुको हत्या र दमनमा उत्रिएको छ । प्रकृति माताको अति दोहन गरेर मानिस आफैले आफुलाइ संकट निम्त्याइरहेको छ । करोडौं बर्ष देखि अन्य प्राणीको शरीरमा रुप र स्वरुप बदलेर बाँचिरहेको जीवाणु मानिसको शरीरमा प्रबेश गरेपछि उसले पहिला देखि उपभोग गर्दै आएको स्वाद र सन्तुष्ठी प्राप्तिको खोजीमा आफ्नो तागत र क्षमता प्रयोग गर्ने नै भयो । मानिसको शरीरमा एक हजार भन्दा बढि किसिमका जीवाणु रहेका हुन्छन । अन्य प्राणीबाट बिकसित भएका जीवाणुहरु स्वस्थ्य र बलियो मानिसको शरीरमा प्रबेश गरे तापनि मानिसमा रहेका जीवाणुको प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण कुनै क्षति गर्न नसक्ने तर कमजोर स्वास्थ्य भएका मानिसको शरीरमा प्रबेश गर्नासाथ शरीरमा रहेका जीवाणुले प्रतिरोध गर्न नसकेपछि गम्भिर असर पार्नु स्वभाविकै हो। आज हामीले भोगिरहेको नोवेल कोरोना जीवाणुसंगको लडाई पनि यसैको एउटा रुप हो ।
बिज्ञान र प्रबिधिको बिकास गरेर मंगलग्रहमा पुग्ने अनि सारा संसारलाइ सानो चिप्समा केन्द्रित गर्न सक्षम मानव जातिलाइ एउटा नोवेल कोरोना भाइरसले त यस्तो हायलकायल बनाएको छ । भविश्यमा यस्ता धेरै जीवाणुले एकैचोटी आक्रमण गरेमा हाम्रो शरीरले कसरी प्रतिरोध गर्न सक्ला ? त्यतिबेला हामी मर्नु बाहेक अर्को कुनै बिकल्प रहनेछैन । यसो भएमा मानव सभ्यताको निरन्तरता पनि समाप्त हुनेछ । भविश्यमा यस्तो अवस्था नआोस भन्नका लागि हामी आजै देखि प्रकृति र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणमा लाग्न जरुरी छ । प्रकृतिले मानिसको सभ्यतालाइ युगौंयुग सम्म निरन्तरता दिनका लागि उपलब्ध गराएका आहार, बिहार, खानपान र जीवनशैलीलाई आफ्नो जीवनको अङ्गको रुपमा अपनाउ । वन, जंगल, जनस्पति, वन्यजन्तु र हाम्रा रैथाने बिउबिजन संरक्षण गरौं । बिषादी रहित कृषि उत्पादन र मौलिक खानपान तथा आहारबिहारको जगेर्ना गर्दै हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाऔं । आजका दिनसम्म नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने कोबिड १९ रोगको उपचार छैन । भौतिक दुरी कायम गर्ने, नाक मुखमा जीवाणु पस्न नसक्ने गरी मास्कले ढाक्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धोएमा संक्रमणबाट बच्न सकिने कुरा बताइएको छ । तर अमेरीकी राष्ट्रपति देखि संसारका राजा महाराजा, हिन्दी चलचित्रका बिख्यात नायक अमिता बच्चन अनि हाम्रो देशका मन्त्री, सांसद, मेयर र अरबपति धनाढ्य बिनोद चौधरी लगायतका ब्यक्तिहरुले भौतिक दुरी कायम नगरेर, नाक मुख नछोपेर वा साबुन पानीले हात नधोएकै कारण कोरोना संक्रमित भएका होलान त ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्ने गरेको छ । श्री प्रकृति माताले हामी सबैको रक्षा गरुन । बिजया दशमी २०७७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:२० प्रकाशित